Yintoni imizobo yesikimu: iimpawu eziphambili kunye nemisebenzi | Abadali be-Intanethi
Umthombo: iNkcubeko ebonakalayo
Imizobo kukutolikwa okunokuthi kube ngumfuziselo okanye umgca, umboniso wayo owenziwe ngezinto ezahlukeneyo zegraphic ezihamba kunye neefom zazo kwaye zibonelela ngombono womzimba obonakalisa ubugcisa.
Ngaphandle kwakho konke oku, imizobo ihambe nathi kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye ibe yinxalenye yemisebenzi emininzi yobugcisa eboniswa kwihlabathi liphela.
Yiyo loo nto kwesi sifundo, sikubonisa umzekelo womzobo ogqitha ngaphaya kwesiqhelo okanye esekiweyo, kwaye obonisa iimpawu ezisebenzayo ngakumbi.Ngokufutshane, silapha ukuze sithethe nawe malunga nemizobo ecwangcisiweyo. Siza kukubonisa eminye yemisebenzi yayo kwaye siya kuchaza ukuba ziphi na, ukongeza kwiintlobo zazo ezahlukeneyo.
1 imizobo ecwangcisiweyo
1.1.1 umbhalo kunye nomfanekiso
2 Indlela yokuzoba umzobo weskim
2.1 umxholo kunye nendawo
2.2 Izinto eziphathekayo
2.4 Ukwenziwa komntu
3 usetyenziso lokuzoba
3.3 Itshathi yeLucid
Olu hlobo lomzobo, ngokungafaniyo nezo siqhele ukuzibona kwimifanekiso, Ziluhlobo lwemizobo kunye nokubonakaliswa apho into esiyaziyo njengezicwangciso zikhoyo kakhulu.. Ukongeza, izalisekisa umsebenzi ophambili wokukwazi ukuhlalutya kunye nokulungelelanisa ulwazi lomzobo ngendlela ehambelana kakhulu.
Ngokuqhelekileyo, umzobo njengoko siyazi ukuba uwela kwindawo yobugcisa, ngakolunye uhlangothi, olu hlobo lomzobo luyinzululwazi ngakumbi, kwaye lunokubonwa lumelwe kwiifomathi ezahlukeneyo, oko kukuthi, ngokwenyama nangokwencwadi okanye umntu othile. I-anatomy encyclopedia, njengakumzobo we-3D apho ijolise khona ukunika kunye nokudala i-anatomy egqibeleleyo ye-avatar yomdlalo wevidiyo othile.
Imizobo ecwangcisiweyo ikholisa ukwenza amaphepha eencwadi abe maninzi kakhulu njengoko esebenza njengesalathiso kwaye ikunceda ukukukhokela ngcono ekufundeni. Kungenxa yesi sizathu ukuba kuninzi lwabashicileli, sinokufumana uphindaphindo olunye okanye ngaphezulu olushicilelweyo olu didi lwemizobo. Zisisikhokelo esigqibeleleyo sokufunda ngakumbi malunga nolwazi onokunikezela ngalo.
umbhalo kunye nomfanekiso
Bayimizobo apho Imalunga nokudibanisa imiba ebalulekileyo yegraphic efana nesicatshulwa kunye nomfanekiso, okanye kulo mzekeliso. Ukongeza, zinokukhatshwa zii-icon ezifana neentolo kwaye zalathise iliso lomfundi okanye lombukeli kwinto esifuna bayijonge. Sinokufumana, umzekelo, kwiincwadi zobunjineli, ukuba umfanekiso wenxalenye ethile yesithuthi uboniswa njani kwaye inxalenye nganye ihamba ngokwahlukileyo kunye nesicatshulwa apho zichaza ukuba yintoni nganye yazo.
Ukuba sivumelana kwaye sivumelana ngento ethile, kukuba zihlobene nolwazi esifuna ukukunika lona. Oko kukuthi, zama ukunxulumana naloo nto iyindlwane epheleleyo kwaye kufuneka yahlulwe ukuze uyiqonde.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ziyimizobo apho zinokukhatshwa ziisimboli ezahlukeneyo, zishiya ngaphandle kwelizwe lemifanekiso, zinokuthi zithatyathelw’ indawo zizisimboli ezibonisa kanye into enye esizimisele ukuyithetha okanye ukuyithetha ngemizobo. Iqinisekile Ziyimizobo esebenzayo kakhulu ehlangabezana neenjongo ezahlukeneyo kwaye inokubonakaliswa ngeendlela ezahlukeneyo.
Indlela yokuzoba umzobo weskim
Ukuze uzobe umzobo othile weskim, Kuyimfuneko ukuba kuthathelwe ingqalelo iinkalo ezahlukeneyo kwintshukumo.
Akunjalo kuphela ekuhambeni kwayo kodwa naxa usebenzisa izinto ezihambelanayo. Yiyo loo nto kuyimfuneko ukuba uthathele ingqalelo le miba kuba iyakuchaza iinjongo zakho ngalo mzuzu uthatha isigqibo sokuzizoba.
Ziyimiba emifutshane kwaye, nangona xa uqala ukuyibona isenokubonakala iyinto elula ukuyiqonda, abazobi abaninzi abayithatheli ngqalelo loo nto kwaye umyalezo wabo awutolikwa ngeyona ndlela ichanekileyo.
umxholo kunye nendawo
Ngaphambi kokuba uqale ukuzoba, kufuneka ucinge malunga nento ofuna ukuyizoba kwaye ngubani oza kujongana nayo ngalo lonke ulwazi onalo. Ukuba sijonga iincwadi zabantwana okanye kubaphulaphuli abathile abancinci, umgca wegraphic osetyenziswayo kwimizobo udla ngokwahlukileyo, omnye ujiyile, omnye ubhityile, kodwa bayakwazi ukuyinika imilo abayidingayo ukuze iqondwe luluntu. . Okufanayo kwenzeka ngolu hlobo lwemizobo, kuyimfuneko ukwazi ukuba ngubani esiza kujongana nayo ukuze siqonde ukuba kufuneka sisasaze njani ulwazi.
Kukho iibrashi, iimpawu, iipensile njl. Ngokufutshane, umzobi wekhathuni kufuneka abe nebrifkheyisi yakhe etshajwe ngokutsha ngezinto ezimncedayo kwimizobo yakhe. Kungenxa yesi sizathu ukuba, ngaphezu kwezinto zonke, Kufuneka sithathele ingqalelo ubukhulu becala ukuba zeziphi izinto esiza kuzisebenzisa ukwenza imizobo, nangona kuyinyani ukuba siye saphawula ngaphambili ukuba le mizobo ayinayo inkcazo yobugcisa, kodwa kunoko inzululwazi, kodwa kumgca wegraphic ophuhliswayo kuyimfuneko ukusebenzisa into ethile kunye nokwazi ngaphezu kwayo yonke into ebonisiweyo. Ngamafutshane, funda izixhobo zakho.
Ukuba singabayili, ithowuni esinxibelelana ngayo noluntu lwethu okanye nomxhasi wethu yiyo eya kuchaza indlela esiyiyo phambi kwabanye. Ewe, kwenzeka into efanayo xa uzobe, kuyimfuneko ukwazi ukuba yeyiphi impawu esiza kuyinika kwimizobo yethu, kodwa ukusuka kumbono ongaphezulu wokubonwayo.
Xa sithetha ngethowuni, sithetha ngendlela esiwuqinisa ngayo umgca wegrafiki, yeyiphi imibala eyona ilungileyo kwaye ihamba kakuhle kunye nolwazi olubonisiweyo kwaye, ngaphezu kwayo yonke, yeyiphi imizobo eyigrafiki eyona ifanelekileyo. Ithoni yenye yezinto ezisisiseko ekufuneka zithathelwe ingqalelo.
Ukuba kukho into esiyaziyo ngokuqinisekileyo malunga nemizobo, kungenxa yophawu olukwaziyo ukulushiya. KUNYEukuba sithi, ngalo lonke ixesha sizoba sibonisa ubuni bethu, sixelela abaphulaphuli bethu ukuba sinjani kwaye singoobani. Yiyo loo nto, kwakudala ngaphambi kokwazi ukuba siyintoni na isimbo sethu, kukwayimfuneko ukwazi ukuba siza kuba njani kule nto siyenzayo.
Naluphi na uhlobo lomzobo esijongene nalo, simele sishiye itywina elikroliweyo, ukuze ngale ndlela sizazi kakuhle size siluqonde ngakumbi ulwazi esifuna ukulunikela. Ngamafutshane, shiya elona nqaku lilungileyo.
Esi sixhobo siphawulwa ngokuvuleleka kuzo zonke iindidi zoluntu kuba sisebenza ngokufanelekileyo njengephepha lewebhu. Sesinye sezona zixhobo zisebenzayo kuba inethuba lokuzoba imizobo yomibini kunye neesekethe ezahlukeneyo. oko kuya kukunceda ukulungelelanisa ngcono ulwazi lwakho.
Enye yezinto ezinomdla kwesi sixhobo kukuba ngenxa yeetemplates zayo, ziyakwazi ukuyila iindawo ezahlukeneyo zemizobo yakho kwaye zinike umlingiswa abawudingayo. Ngamafutshane, ukuba ufuna ukudweba olu hlobo lwemizobo ngokukhawuleza kwaye simahla, yenye yeyona ndlela ilungileyo.
I-GitMind sisixhobo esikuvumela ukuba wenze imizobo kwaye ngakumbi iimephu zengqondo. Iimephu zengqiqo luhlobo lomzobo olucwangcisiweyo olunoxanduva lokucanda ulwazi kunye nokulubonisa ngendlela ehambelanayo.
Eyona nto ibonakalisa kakhulu esi sixhobo kukuba xa sele uyiyile imizobo yakho, ungazithumela ngaphandle kwiifomathi ezahlukeneyo, nokuba yiPNG, JPG okanye iPDF. Sesinye sezixhobo zenkwenkwezi ukuba into oyikhangelayo iyahlukahluka kwaye ilula ekuthumeleni imizobo yakho ukuyongeza kwimidiya eyahlukeneyo.
Umthombo: PC Mag
Ngokungafaniyo nezangaphambili, uLucidChart unazo zombini iprimiyamu kunye nenguqulelo yasimahla. Enezibonelelo ezithile kuba unokukhetha kwiinketho ezininzi ngakumbi. Ukushiya ecaleni inguqulelo yayo engabizi kakhulu, ngokwemiba yobugcisa ethe kratya, nayo inethuba lokudala imizobo eyahlukeneyo.
Sisixhobo esigqibeleleyo kuba sikwafumaneka kuzo zombini iiDrayivu zikaGoogle kunye namaQela eMicrosoft. Ukongeza, ikwayenye yeenketho ezinefomathi ezahlukeneyo zokuthumela ngaphandle, eziququzelela imisebenzi yayo kwaye iyenze ibe nomtsalane ngakumbi.
Ikwafanelekile ukuba ujonge into elula kwaye esebenzayo.
I-Coggle lelinye lawona maqonga alula kwaye aluncedo kwi-intanethi ukuyila imizobo enje nge-schematics okanye imizobo engaphezulu yokucinga. Sesinye sezixhobo esinazo neenguqulelo ezimbini ezahlukeneyo, zombini simahla kwaye zihlawulwe.
Ukongeza, inokhetho lokuthumela ngaphandle imizobo yakho kwiifomathi ngaphandle kwezo zikhankanywe ngaphambili, kuba nayo. Kuyenzeka ukuba ithunyelwe kumazwe angaphandle nge-TXT, iPDF okanye ifomathi yeJPG. Ngamafutshane, enye yezixhobo ezithi, ngenxa yokuhamba kwayo, ilula kwaye ikhawuleza, iba sisizathu esihle sokuzama.
Imizobo ihambe nathi kuyo yonke imbali. Uninzi lwazo lwaqala njengomboniso omncinci kwaye ngokuhamba kwexesha, baye baba yindlela elungileyo yokunxibelelana. Ukuba sithetha ngemizobo yeskim, sithetha malunga nendlela esinokuyixela ngayo into esifuna ukuyithetha kwaye ngayiphi na indlela.
Yiyo loo nto sinethemba lokuba ufunde ngakumbi malunga nehlabathi lemizobo kunye nemizobo. Nangona kuyinyani ukuba zinobugcisa ngakumbi kunemiba yobugcisa, kodwa ngokuqinisekileyo uyakwazi ukuzenza ngezinye zezixhobo esizicetyisileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni imizobo ecwangcisiweyo